लक्ष्मी बैंकको युरो कप योजना Mobile Money – Predict And Win! ~ Banking Khabar
बैंकिङ खबर/ यस वर्ष आयोजना भइरहेको युरो कप २०२१ को सुरुवातसँगै आएसँगै फुटबलका फ्यानहरुमा मात्र नभई अन्य सर्वसाधारणहरु मा पनि समेत यसको उमङ्ग छाएको देख्न सकिन्छ ।
यो क्याम्पेन युरो कप २०२१ सुरु भएको दिन देखी, अर्थात जुन ११ देखी सुरु भई भएको हो । युरो कपको अन्त्यसम्म, अर्थात् अन्तिम दिन जुलाई ११ सम्म जारी रहने छ। यस क्याम्पेन मा ५ जना भाग्यशाली विजेताहरुले ५० एम.बि.पि.एसस्. को १ वर्ष अवधिको ईन्टरनेट सब्स्क्रिप्सन कगदकअचष्अउतष्यल निःशुल्क पाउन सक्नुहुनेछ ।
यो क्याम्पेनमा भाग लिन लक्ष्मी बैंकका ग्राहकहरुले मोबाईल मनी सेवा सुचारु गरेको हुनु पर्दछ र मोबाईल मनी का प्रयोगकर्ताले भने सजिलै एप द्वारा नगद ट्रान्स्फर गरी यसमा सहभागी हुन सक्नुहुनेछ ।सक्नेछन्। मोबाईल मनी को ’फोन–पे डैरेक्ट’ (अन्तर बैंक नगद ट्रान्स्फर) बाट नगद ट्रान्सस्फर गर्दा प्रोमो कोड राख्ने ठाउँ मा आफुले अनुमान गरेको युरो कप विजेता देशको नाम राख्नुपर्नेछ र। यती यति गरेपछी नै यस क्याम्पेनमा सहभागी भईन्छ। हुन सकिनेछ ।
क्याम्पेनको अवधि पछि युरो कप को विजेता देशको सही अनुमान गर्नुहुने ग्राहकहरु मध्येबाट लक्की ड्र मार्फत ५ जनालाई विजेता घोषणा गरिनेछन् । विजेता ग्राहकमहानुभावहरुले जसले १ वर्ष को ईन्टरनेट सब्स्क्रिप्सन निशुल्क पाउनुहुनेछ ।पाउने छन। जती धेरै पटक नगद ट्रान्स्फर गर्नुहुन्छ, त्यती नै धेरै जित्ने